အသည်းအစားထိုးခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများ - Hello Sayarwon
အသည်းအစားထိုးခြင်း အမျိုးအစားများနှင့် အဓိက နောက်ဆက်တွဲပြသနာများ
အသည်းအစားထိုးခြင်း အမျိုးအစား ၂မျိုး ရှိပါတယ်။ တမျိုးကတော့ သေဆုံးပြီးအလှူရှင်ဆီမှ အသည်းကို ရယူအစားထိုးခြင်း (DDLT) ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တမျီုးကတော့ အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ အလှူရှင်ဆီကနေ ရယူအစားထိုးခြင်း (LDLT) ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူရှင်ဆီက အသည်းလက်ခံတယ်ဆိုရာမှာ အသည်းရဲ့ ၅၀-၇၀%ခန့်ကို လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အသည်းအစားထိုးခြင်းကနေ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အသည်းအစိတ်အပိုင်းဟာ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အသည်းကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ လှူဒါန်းလိုက်သူရော လက်ခံသူမှာပါ အသည်းဟာ ပုံမှန်အရွယ်အစားအတိုင်း ခြောက်လအတွင်း ပြန်လည် ကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မုဟာ စိတ်ချရရင်တောင် နောက်ဆက်တွဲပြသနာကြုံနိုင်ခြေ ၁၅%ထိရှိနိုင်ပြီး ဝ.၀၅%ထိ သေဆုံးနိုင်ခြေ ရှိနေပါသေးတယ်။ များသောအားဖြင့် အဓိက ၃မျိုး ကြူံရတတ်ပါတယ်။
တခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစားထိုးခြင်းတွေလိုပဲ လူနာကို ကိုယ်ခံအားနှိမ့်ထားမပေးရင် အစားထိုးလိုက်တဲ့ အသည်းကို ကိုယ်ခန္ဓါကနေ လက်မခံပါဘူး။ အသည်းအစားထိုးခြင်းမှာ ဒီလိုလက်မခံခြင်းဟာ လျော့နည်းလာပေမယ့် အသည်းအစားထိုး လူနာများအနေနဲ့ ကိုယ်ခံအားနှိမ့်ပေးတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို သူတို့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ သောက်သုံးနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဆေးဝါးတွေဟာ လူနာတွေရဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ ဆေးတိုင်းမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကော်တီဆုန်းပါတဲ့ဆေးတွေမှာ အရည်ဓါတ်စုခြင်း၊ မျက်နှာအမ်းခြင်း၊ ဆီးချိုနဲ့ အရိုးပွခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းငယ်ရှိနေခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားနှိမ့်ပေးတဲ့ ဆေးတမျိုးဖြစ်တဲ့ Cyclosporineဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကို တက်စေပြီး အမွေးအမြှင်များ ထွက်လာစေပါတယ်။ ဆေးပမာဏကို သေချာစွာ ချိန်ဆရပါတယ်။ ကျောက်ကပ်လည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာဆေးပမာဏ ပါဝင်နှုန်းကို စစ်ဆေးပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားနှိမ့်ဆေး တမျိုးဖြစ်တဲ့ FK-506 ရဲ့ တွေ့ရများတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အာရုံကြော တောင့်တင်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ပိုတက်ဆီယမ်နှင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ် တက်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားထိုးပြီးနောက်မှာ အသည်းကို ကိုယ်ခန္ဓါမှ လက်မခံဘဲ တွန်းကန်ရာမှာ ၃မျိုးရှိပါတယ်။ ရုတ်တရက် ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားတဲ့ တွန်းကန်ခြင်း၊ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားတဲ့ တွန်းကန်ခြင်း၊ အချိန်ကြာမှဖြစ်ပွားတဲ့ တွန်းကန်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ အပေါ်ယံဒဏ်ရာတွေဟာ ခွဲစိတ်ပြီး မိနစ်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်းအတွင်း ပေါ်လာပါတယ်။ ကာလကြာမှ တွန်းကန်ခြင်းကတော့ တနှစ်ကျော်ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက် တွန်းကန်ခြင်းကတော့ သတိပေးလက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ AST, ALT, GGT စတဲ့ စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေဟာ အစားထိုးခြင်းကို တွန်းကန်တဲ့လူနာတွေမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အသည်းလုပ်ငန်း စစ်ဆေးခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ အမိုးနီးယား၊ ဘီလီရူဘင်၊ အယ်လ်ဗျူမင်နဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ် စတာတွေရဲ့ ပမာဏကို စစ်ဆေးခြင်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
– ဦးနှောက်ပိုင်း ထိခိုက်ခြင်း
– သွေးခြေဥခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း
သိပ်မထင်ရှားပေမယ့် အောက်ပါလက္ခဏာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
အစားထိုးခြင်း လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာ ပြုစုကုသခြင်းဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန်စွာ ကျန်းမာလာစေနိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်ခန္ဓါမှ လက်မခံခြင်းကို ကုကွယ်ရန် ကိုယ်ခံအားနှိမ့်သော ဆေးများပေးခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသောက်ခြင်း၊ အသည်းအစားထိုးခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများကို စောစီးစွာ သိရှိနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံကဆင်းပြီးနောက်မှာ ချိန်းဆိုတဲ့အတိုင်း ပုံမှန်ပြသပြီး အစားထိုးလိုက်တဲ့ အသည်းရဲ့ အခြေအနေကို စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ပြသရမယ့်အချိန်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ကျဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ကြည့်ခြင်းဟာ ကိုယ်ခံအားနှိမ့်စေတဲ့ ဆေးတွေကို ချိန်ညှိဖို့အပြင် ဆီးချို၊ ကိုလက်စထရောတက်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း စတဲ့ကျန်းမာရေး ပြသနာတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ အစားထိုးပြီး ၅နှစ်အကြာမှာ လူနာများ အသက်ရှင်နိုင်ခြေဟာ ၈၀%အထက်မှာရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
NHS Choices, Complications of liver transplant, http://www.nhs.uk/Conditions/Liver-transplant/Pages/Complications.aspx. Accessed on April 7, 2017
Mayo Clinic Staff, Liver Transplant, http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/liver-transplant/details/risks/cmc-20211846. Accesed on April 7, 2017